HIM | Health in Myanmar » 2009 » September
အေအာရ်ဗီဆေးနဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ပင်တွေ တွဲဖက်မသောက်သင့်ပါ
အေအာရ်ဗီဆေးတွေကို ဆေးဖက်ဝင်အပင်၊ ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ တွဲဖက်သောက်သုံးတာဟာ အေအာရ်ဗီ ဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ပိုပြီးဖြစ်တာကြောင့် တွဲမသောက် သင့်ကြောင်း ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ ကုသရေး ကျွမ်းကျင်သူ တချို့က ပြောပါတယ်။
Two faith based initiatives in Sagaing
Here are two presentations from the ICAAP on faithbased initiatives in Sagaing. Good work.
Not excited about the HIV vaccine trial
With all the excitement about the first positive results of an HIV vaccine you would think it was successful. The success was very very limited. Please do not get excited about an HIV vaccine in the next ten years.
NGO Code of Conduct for Health Systems Strengthening and Myanmar
There is an NGO Code of Conduct for Health Systems Strengthening. You can look at the titles of the six articles below or download it here. Will there be any international or local nongovernmental organisations in Myanmar signing on to this code of conduct? He wonders …
အစိုးရထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အများစုဟာ ဒီကမ္ဘာမြေအတွင်းမှာ လူသားတွေကို ခြိမ်းခြောက်အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ AIDS ရောဂါကပ်ဆိုးကို ဘယ်လိုသဏ္ဍာန်နဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သုသေသန ကွင်းပြင်ကြီးမှာ လူသားသုံးဦးကို လေ့လာစမ်းသပ်ရင်း HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ကာကွယ်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
AIDS ကာကွယ် ကုသဆေး စမ်းသပ်မှု ရလဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်
သုတေသီ များက လက်ရှိစမ်းသပ် နေသည့် AIDS ရောဂါ ကာကွယ် ကုသ ဆေးသည် ရလဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ် နေကြောင်း စက်တင်ဘာ (၂၄)ရက် နေ့က ကြေညာ လိုက်သည်။
ဒီကနေ့ သတင်းတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါလာတာကတော့ ခုခံကျရောဂါကာကွယ်ဆေး သုတေသန အောင်မြင်မှု သတင်းပါ။ ထိုင်း-အမေရိကန် ၆ နှစ်ကြာ ပူးတွဲ သုတေသနပြုချက်အရ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသူတွေဟာ ကာကွယ်ဆေး ထိုးမထားသူတွေထက် ခုခံကျရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၃၁ ရာနှုန်း လျော့နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် တည်ရှိရာ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်တွင် အနှိပ်ခန်းများနှင့် လောင်းကစား ဝိုင်းများ ပြည့်နှက်နေကြောင်း သိရသည်။
ICAAP abstract and presentation onaprivate sector initiative
Here is an ICAAP abstract and presentation onapartnership with six physicians working in the private sector in Yangon.
အိန္ဒိယမှာ တီဗွီကနေ ကြော်ညာနေတဲ့ UNWANTED-72 မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန် အတွက်ဆေး
အိန္ဒိယတွင် ရောင်းချနေသော UNWANTED-72 ဟု ခေါ်သည့် မလိုချင်သော့ကိုယ်ဝန် အတွက်ဆေးတစ်မျိုး အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးထားသည်။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar3 comments
ဤ ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်များသည် HIM စာဖတ်သူများအတွက် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ရစေခြင်းအလို့ငှာ တင်ပြပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး မည်သို့ကိုမျှ ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်လိုခြင်း မရှိပါ။ (မော်ဒရေတာ)
Poor reporting from India
How can an article on improving reporting be such an example of poor reporting?